Waxaa maanta oo Isniin ah looga dhawaaqey Caasimadda Puntland ee Garoowe Mac-had loogu magacdarey HAYAAN, oo ah nooca loo yaqaan “Think tank” kaas oo ka shaqeyn doono Daraasaadka Siyaasadda iyo Sahminta.
Xafladdii furitaanka waxaa ka soo qayb-galay Madaxweyne ku-xigenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Camey, qaar ka mid ah golaha xukuumadda Puntland, Masuuliyiin kale, hay’ado iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Puntland.
Xafladda furitaanka ayaa ka dhacdey hoolka shirarka ee Jaamacadda PSU, waxaana faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey Mac-hadka Daraasaadka Siyaasadda iyo Sahminta Agaasimaha mac-hadkaas Sharmaarke Maxamed Faarax.
Sharmarke Maxamed ayaa sheegey muhimadda ay ku fadhido in la sameeyo sahan, cilmibaaris iyo daraasad xaqiiq ku fadhiya, dalkastana ay muhiim u tahay in ay cilmi baaris ka sameeyaan dadka u dhashay iyo aqoon yahanadiisa, Wuxuu sidoo kale ka hadlay dhibaatada ay leedahay in cilmibaaris uu ka sameeyo Soomaaliya qof Ajnabi ah waana sababta uu sheegay in ay ka kaliftey iyaga iyo aqoonyahano kale in ay u guntadaan dhisidda Mac-hadkan.
Sharmaarke ayaa sheegey in sababta u weyn ee ku xanbaartey in ay Machadkan asaasaan ay tahay, baaritaan kasta oo Soomaaliya ku saabsan, waxaa diyaariye shisheeye ama dad aan u dhalan Soomaaliya, biyo sacabadaada ayaa looga dhergaa maadaama Aqoonyahankii soo batey in ay iyagu diyaarsadaan sahankooda iyo diraasaadkooda. Shisheeye markii uu wax kaa qoro, kuma jirto in ay fahmaan xalkeena ayuu yiri Mr Farah Agaasimaha HAYAAN.
Agaasimaha Hayaan Institute Research and Policy ayaa Sharmarke Faarax ayaa sheegay in ay baaritaan iyo daraasaad ku sameyn doonaan, Arrimaha bulshada, Caafimaadka, Dhaqaalaha, Waxbarashada iyo Dowladda wanaaga, Waxaana ka shaqeyn doona aqoonyahan khibrad dheer u leh Puntland muddo dheerna ka soo shaqeynaayey hawlaha ay daraasaadka ku samaynayaan.
Dhegayso Agaasimaha Machadka HAYAAN Sharmarke Farah
“Hadii aan la helin cilmi-baaris ku salaysan deegaanka maba dhacdo in la helo horumar , Hayaan waxaan ku dhiirigelin qoraalada aad samaynaysaan ha noqdeen af-soomaali , luuqadaha kalana ku qora” Ayuu yiri Eng.Camey.
Dhegayso Khudbaddii Madaxweyne ku-xigeenka Puntland
Mac-hadkan ayaa ah kii u horeeyey ee noociisa oo kale ah oo Puntland looga dhawaaqo, waxaana dadkii ka soo qayb galay ay si weyn ugu riyaaqeen aasaaska Mah-hada HAYAAN, waxaana ay sheegeen in uu is-bedel ku soo kordhin doono Puntland.
Agaasimaha Machadka Hayaan oo BBC uga waramey Kalluumeysiga sharci darrada ah ee xeebaha Soomaaliya ka socda----- AKHRI